Google ga-enye echiche ndị atụgharịrị banyere ụlọ nri na isi ihe na-akpali mmasị | Gam akporosis
Google ga-enye echiche ndị atụgharịrị banyere ụlọ nri na isi ihe na-amasị anyị
Ma anyị ejiri ya ịgagharị mgbe niile na mba ndị ọzọ n'ụwa, ma ọ bụ na anyị mere njem otu oge, otu n'ime ihe mbụ anyị na-emekarị bụ ịchọ ụlọ nri, ọkacha mma nri ọdịnala, ebe anyị nwere ike iri nri ehihie na nri abalị, ọ bụghị naanị site n'echiche dị mkpa, mana dịka akụkụ nke ọrụ ndị njem anyị, na "njem njem gastronomy" dị ka ọtụtụ na-akpọ ya.
Maka nke a, ama anyị na Google bụ ngwaọrụ abụọ dị ịtụnanya, ebe ọ na-enye anyị ohere ịchọ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ ma, debe echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ, ihe ga-enyere anyị aka na mkpebi anyị. Ma, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na anyị adịghị aghọta okwu ndị a n'ihi na ha adịghị n'asụsụ anyị. Mana Google ekwuputala na ọ ga-edozi nsogbu ahụ site na ịnye Nyocha nke ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na isi nke mmasị tụgharịrị ma na Google Maps yana na ngwa ya kachasị.
Dị ka ụlọ ọrụ n'onwe ya si kọọ site na posta na ya ukara blog, asụsụ agakwaghị abụ nsogbu maka ndị ọrụ ahụ niile na-aga mba ọzọ ma chọọ ịlele nyocha ndị ọrụ ndị ọzọ hapụrụ na Google Maps banyere ụlọ oriri na ọ andụ andụ na isi ihe ndị ọzọ ha masịrị.
Ihe ọhụrụ a ga-egosiputa echiche ma ọ bụ nyocha atụgharịrị gaa n'asụsụ obodo onye ọrụ ahụ n'elu nke ihuenyo ngwaọrụ, ebe ụdị mbụ ga-apụta na ala, dị ka anyị nwere ike ịhụ na onyogho nke gosipụtara ozi ọma a n'elu.
N'ihi nhọrọ ọhụrụ a, mkpa idetuo ederede nke echiche ndị a ma mado ya na Google Translate ma ọ bụ ngwa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ntụgharị ọ bụla iji ghọta ya ga-apụ n'anya.
Ọ bụ ezie na ọ bụ obere ihe ọhụrụ agbakwunyere ọrụ Google, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-abụ nnukwu ọrụ, ọkachasị maka ndị ahụ, ma ọ bụ maka ọrụ ma ọ bụ maka ebumnuche onwe ha, na-aga ọtụtụ ụwa. Ma, ọ ga-enyere anyị aka ịchọpụta ihe ụmụ amaala ndị ọzọ chere gbasara ụlọ oriri na ọ restaurantsụ thatụ anyị nwere nso na ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google ga-enye echiche ndị atụgharịrị banyere ụlọ nri na isi ihe na-amasị anyị
Nwere ike ịzụta Casio Pro Trek WSD-F20, smartwatch niile nke tọọ na Android Wear 2.0